Sawirro: Madaxweynaha Galmudug oo tababar u soo xiray dufcadii 1aad Ciidanka Daraawiishta | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Sawirro: Madaxweynaha Galmudug oo tababar u soo xiray dufcadii 1aad Ciidanka Daraawiishta
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa xerada ciidanka Indhaqaris ee ku taala duleedka degmada Gaalkacyo tababar ugu soo xiray dufcaddii 1aad oo si buuxda u dhammaysatay tababarkooda, kuwaasi oo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Dowladda Galmudug.
Ciidanka tababarku u xirmay ayaa soo bandhigay xirfado kala duwan oo ay barteen muddadii uu u socdey tababarku.
Wasiirka Amniga Gudaha Axmed Macallin Fiqi oo goobjoog ka ahaa munaasabadda qalinjebinta ayaa sharaxaad ka bixiyay heerarkii tababarku soomaray iyo tayadda ciidamada, isagooa xusay in ciidanka jirka iyo maskaxdaba laga dhisay.
Madaxweynaha Dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa kula dardaarmay dufcaddan qalinjabisay in ay si daacad ah u gutaan waajibaadkooda ku aadan sugidda nabadgelyada iyo la dagaalanka cadawga, Isagoona u ballanqaaday in Dowladda Galmudug diyaar la tahay xuquuqdooda.
Madaxweynaha ayaa gabagabadii munaasabaddana abaalmarinno ku guddoonsiiyay saraakiishii tababarka bixinaysay iyo askartii ugu wanaagsaneed intii uu socday tababarka.
Dufcaddan ayaa billaw u ah dhowr dufcadood oo meelo kala duwan oo Galmudug ah haatan tababar uga socda.
Previous articleSahra Abuukar oo ku guuleysatay tartanka quruxda Mareykanka
Next articleC/casiis Lafta Gareen “Kuraasta dadka qaar ku fadhiyaan waa looga xaq leeyahay”
51-sano oo maanta laga joogo Afgambigii Militari ee ka dhacay Soomaaliya!
Maxamed Bin Salman oo Mareykanka laga Dacweeyay
Kabtan u dhashay dalka China oo lagusoo oogay dacwad ku saabsan...
Kaaliye Maxkamadeed oo lagu diley magaalada Garowe
Taliye Odowaa oo ka hadlay dagaalo ka dhacay gobolka Bay
Akhriso Magacyada & Qabiilada Wasiirada cusub ee caawa lagu dhawaaqay
Maraykanka oo Liiska Argagaxisada ka qaadayo dalka Suudaan
xogdoonnews - October 21, 2020